Somaliland: Xildhibaanno Ka Tirsan Gollaha Wakiillada Oo Ka Digay In Naxli Lagu Ladho Qaddiyada Waqooyiga Hargeysa. - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xildhibaanno Ka Tirsan Gollaha Wakiillada Oo Ka Digay In Naxli Lagu...
Qaar ka mid ah mudaneyaasha golaha Wakiiladda Somaliland ee ka soo jeedda woqooyiga gobolka Maroodijeex ayaa si adag uga jawaabay hadallo maalmahan ka soo yeedhayay qaar ka mid ah xildhibaanadda ay isku golaha yihiin ee k a soo jeedda gobolka Awdal iyo sidoo kale salaadiinta gobolkaasi. Arrintaasi oo ku saabsan lixda goobood ee ku yaalla woqooyiga gobolka Maroodijeex ee hore muranku uga taagnaa, oo ay dhawaan shaacisay xukuumadu in laga qabanayo diiwaangelinta codbixiyeyaasha.
Xildhibaanadani oo shalay warbaahnta kula hadlay magaaladda Hargaysa, waxay kala ahaayeen xildhibaan C/kariin Aw Cali Shabeel, xildhibaan Maxamed Xaaji Maxamuud Cumar Xaashi, iyo C/laahi Xuseen Cige (Blacki), waxaanay ugu baaqeen in dadka siyaasiyiinta ah ee arrintaasi ka hadlay ee ku baaqaya colaadda iyo dhibaatadda in ay joojiyaan hadaladda cunsuriyadaysan. C/kariin Aw Cali Shabeel, oo ugu horayn shirkaasi jaraa’id ka hadlay ayaa sheegay in xubnaha reer Awdal ee sida xun uga hadlay arrintaasi ay meel kaga dhaceen dastuurka qaranka Somaliland iyo xuquuqda dadka degaankaasi. Waxaanu yidhi “Sida aan la wada socono awaamiir ayay dawladu ka bixisay goobaha woqooyiga ee lagu mursan yahay, oo ah in la geeyo sanduuqyadii diiwaangelinta codbixiyeyaasha goobahaasi oo ka tirsanaan jiray degmadda Hargaysa, ilaa imikana ka mid ah. Iyadoo aanu cuskanayno xeerka Lanbar 23/2002 ee xeerka is-maamulka goboladda iyo degmooyinka sida ku cad isagoo ka soo dheegtay qodobadda dastuurka ee arrintaasi ka hadlaya, kaasi oo dhigaya in lixdii degmo ee hore sidoodii lagu daayo ilaa inta la kala xadaynayo”. Mar uu ka jawaabayay dhawaaqyadda ka soo yeedhaya siyasiyiinta, madax dhaqameedka iyo xildhibaanadda reer Awdal, waxa uu yidhi “Waxaanu maqlaynay oo maalmahanba warbaahinta laga sii daayay dad arrintaasi deedifaynayay, taasina waxaanu u aragnaa in ay leeyihiin dawladi ma jirto, kooxi wax ma kala xadayn karto, qabiil-na wax ma kala xadayn karro, xukuumadda ayaa arrintaasi u igman. Waxaanan u aragnaa in arrintaasi ay meel ka dhac ku tahay qaranimadda. Ma cuskanayo anigu qabiil baa dega ama reer gaar ah ayaa dega, Somaliland wakhtiyadda ay xaaladuhu adag yihiin cid waliba way ku baxdaa, oo way degaan dadkuna xuduudo ha kala lahaadee, hadana dhulka waa la wada deganaa, oo biyaha iyo daaqa intaba waa la wada lahaa, laakiin wax laga sameeyo naxli iyo dhibaato laga abuurro arrintaasi ma aha”.
Waxaanu intaasi ku daray xildhibaan Shabeel. “Waxaan leeyahay dadka durbaanadda beenta ah meelahaasi ka tumaya eek u hadaaqaya arrin aan sharci ahayn, in ay ka waantoobaan oo ay dib isugu noqdaan”. Sidoo kale xildhibaan Shabeel, ayaa xukuumadda ku hambalyeeyay go’aankaasi ay gaynayso sanduuqyadda diiwaangelinta lixdaasi goobood.Arrintaasi ay xukuumadu jidaysay, waanu soo dhawaynaynaa, waananu ku hambalyaynaynaa, madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo, go’aankaa xalaasha iyo cadaaladda ah ee uu qaatay oo in badan laalaaday, xaq darro iyo dulmina ku laalaaday, sida xaqiiqadu tahay. Go’aankaa uu maanta gaadhay madaxweynuhu-na waa mid cadaalad ku dhisan, waana ILLAAHAY mahadii, xukuumadana mar labaad waanu ku hambalyaynay-naa.